Sida loo sameeyo falaaraha Adobe Photoshop | Hal-abuurka khadka tooska ah
Iris Gamen | 26/03/2022 20:30 | Tricks
Barnaamijka, Adobe Photoshop kuma xidhna oo kaliya daabacaadda sawirada ama sawirada, laakiin waa a barnaamij intaas ka sii badan, oo leh qalabyo kala duwan oo lagu abuuro sawirro meel eber ah. Looma baahna in aad naftaada ku xidho fikradaas, in ay tahay barnaamij tafatir oo kaliya, Photoshop waxa ka horeeya tillaabooyin badan.
Yaa aan weligii dhicin diyaarinta bandhig ama tafatir sawiro qaar ka mid ah oo ay tahay inuu muujiyo shay muhiim ah oo aan garanayn sida. Dhibaatooyinka qaarkood waxay leeyihiin xal fudud, oo kiiskan waanu samayn doonaa sidaas, kaa caawin doona inaad ku baro sida loo sameeyo fallaadhaha Adobe Photoshop.
Falaadh, waa mid ka mid ah curiyayaasha ugu fudud oo la isticmaalo marka lagu muujinayo curiye meel kasta oo dhexe ah. Adobe Photoshop waxa uu ka kooban yahay qalab ka dhigi doona ku-darsiga falaadhaha mid fudud intii suurtogal ah.
1 Sida loo sawiro taariikhda Photoshop tallaabo tallaabo
2 Noocyada fallaadho ee Adobe Photoshop
3 Sida loo sameeyo fallaadho qaloocan gudaha Photoshop
Sida loo sawiro taariikhda Photoshop tallaabo tallaabo
Qaababka caadiga ah ee Adobe Photoshop waxay kuu oggolaanayaan inaad si sahlan ugu shaqeyso oo leh qaabab kala duwan iyo walxo garaafyo kuwaas oo faa'iido u yeelan doona naqshadahaaga. The qalabka tirooyinka ama foomamka, waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan uguna isticmaalka badan barnaamijka la sheegay.
Photoshop wuxuu leeyahay a noocyo yar yar oo qaabab ah oo yimaadda horay loo sii go'aamiyay. Laakiin waxaad haysataa suurtogalnimada inaad ballaariso, adigoo ku daraya kuwa cusub oo ay sameeyeen naqshadeeyayaasha kale ama naftaada.
La Qalabka xariiqda, waa midda noo ogolaan doonta inaan xariiqno, ka cudur daara dib-u-celinta, sharacayada, labada fallaadho iyo xariiq toosan.
Talaabada ugu horeysa ee aan qaadno waa in aan doorano qalabkeena, oo ku yaala dhinaca bidix ee shaashadda, xulashada qaababka, oo leh calaamad labajibbaaran.
Waxaan ku hayn doonaa cadaadis dhowr ilbiriqsi ka dibna hoos u-hoos u soo bixi doonaa oo kala duwan qaababka joomatari ee aan sawiri karno, waxaanan dooran doonaa qalabka leh qaab xariiq.
Marka aan helno qalabka la doortay, waa inaan sameynaa qeex ballaca xariiqda.
El dhumucda istaroogga xariiqda, waxaan wax ka beddeli karnaa annagoo aadeyno barta ugu sarreysa ee qalabka, dooro ikhtiyaarka istaroogga. Waa inaan ku qeexnaa ballaca laynka ee ku jira baararka ikhtiyaarka ah.
Hal talo oo aanu ku siino waa inaad hubiso deji goobta toosan ee ikhtiyaarka dhagarta, oo ku jira jid buuxa ama dibadda. Taasi waa, haddii dhumucda khadka lagu dhejiyo si loo buuxiyo, lama arki doono.
Mid kale oo ka mid ah siyaabaha jira si loo qeexo dhumucda ballaca xariiqda, waa iyada oo loo marayo xulashada xulashada, taas oo ay ku soo bandhigto ama aan sawir lahayn.
Sida aad ku arki karto sawirkan, in the labajibbaaran cas waxaanu qeexaynaa ballaca laynka, afargeeska liimiga ah waxaanu isticmaalnaa dhumucda si aanu u dejino ballaca.
Talaabada xigta ee aan qaadi doono waa u qoondee midab khadka. Si arrintan loo sameeyo, waxaanu gujin doonaa xariiqda, waxaanan aadi doonaa xulashada sare ee xulashada iyo qaybta buuxinta, daaqad muunad ah ayaa furmi doonta halkaas oo aan dooran doono midabka nagu habboon.
Waxaan horey u haysanay khadka la abuuray, hadda waa inaan ku dhammaynnaa samaynta falaartayada.
Xulashada sare ee bar, halkaas oo aan ku habeynay qaabka iyo midabka, waxaan ku arki doonaa midigta a lowska icon. Haddii aan gujino astaantaas, liiska hoos u dhaca ayaa soo baxaya taas oo aad ku arki karto ikhtiyaarka aad ku dari karto fallaadhaha, bilowga ama dhamaadka.
Waxaan dooranaa midka nagu habboon si aan u dooranno cunsurka aan ka rabno shaqadayada. Xaaladeena, waxaan ku tusi doonaa ikhtiyaarka bilawga ah ee khadka.
Saddexda ikhtiyaar ee kale ee ku jira liiskan, waxaad bedeli kartaa caarada falaarta, adigoo ka dhigaya mid dheer, yar ama qaloocsan. Qaybta xigta waxaan ku tusi doonaa iyaga.
Noocyada fallaadho ee Adobe Photoshop
Sida aan ku aragnay ikhtiyaarka talooyinka taariikhda, waxaan abuuri karnaa doorsoomayaal kala duwan.
Hadday tahay waxaan rabno si fudud xariiq toosan, waxaan kaliya yeelan doonaa inaan doorano qalabka qaabka, dooro xariiqda oo dhan.
Dhanka kale, waxa aan raadineyno waa a fallaadho leh dhibic kaliya dhamaadka, waa in aan samayn doonaa our line toosan iyo in fallaadha madax fursadaha in la tusay, door qaybta dhamaadka.
Halkii haa Waxaan rabnaa caarada bilowga, ikhtiyaarka aan aqbali doono waa kan, bilowga. Ama xitaa ku dar talooyinka labada dhinac, adoo dooranaya labada ikhtiyaar.
Sidoo kale, waan gaari karnaa qaabab kala duwan oo fallaadho ah haddii aan ku ciyaarno fursadaha ballaca, dhererka iyo qulqulka. Iyaga, waxaan ku abuuri karnaa fallaadho leh talooyin dhumuc weyn, fallaadho leh tabo dheer ama qalooc weyn.
Sida loo sameeyo fallaadho qaloocan gudaha Photoshop
Sida kiiska kor lagu sharaxay, waxaan abuuri doonaa Falaadhkeena oo ka soo jeeda qalabka qaababka, iyo xulashada khadka ikhtiyaarka ah.
Marka aan leenahay falaartayada, oo leh Qalabka laynka ee wali la doortay, waxaanu riixi doonaa furayaasha ctrl iyo xarafka t, beddel amarka. Iyo in bar fursadaha, waxaan dooran doonaa mid ka mid ah isbedel xor ah iyo qalloocin.
Talaabada xigta waa inaad gujiso warp option dhanka bidix ee bar fursadaha. Liiska qaababka ay fallaadhaagu qaadan doonto ayaa soo bixi doona. Xaaladeena waxaanu muujinay ikhtiyaarka khasnadda.
Iyada oo tan isbeddel bilaash ah iyo ikhtiyaar dagaal, waxaad ku siin kartaa walxaha naqshadeynta muuqaal ka duwan, iyaga oo siinaya qaabab qalloocan, qaabab mawjad, soo koobid, iwm.
Sidaad aragteen, samaynta fallaadhaha Adobe Photoshop waa hawl aad u fudud. Kaliya leh caawinta qalabka xariiqda iyo fursadaha naloo soo bandhigay, waxaan abuuri karnaa noocyo kala duwan oo fallaadho ah, sida aad u baahan tahay.
Adobe Photoshop waa barnaamij aad ku maamuli karto oo aad sawir kaga samayn karto kun siyaabood oo kala duwan. Laakiin, halka qaar ay ku sii jiraan fikraddaas. Kuwo kalena waxay ka faa'idaystaan ​​fursadaha uu barnaamijkani siinayo si ay u abuuraan naqshado hami badan leh, oo ka sarreeya inta kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tricks » Sida loo sameeyo fallaadhaha Adobe Photoshop
Maxay taariikhdu qarinaysaa astaanta Doritos